मन्त्री महासेठ कमाउ धन्दामा: पत्नी जुलीका हातमा पैसाको पोको ! | Citizen Post News
मन्त्री महासेठ कमाउ धन्दामा: पत्नी जुलीका हातमा पैसाको पोको !
२०७६ साउन १४ गते ११:००
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ केही दिन अघि विवादमा आएका थिए । आफ्नै कार्यकक्षमा समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारलाई भिडियो नखिच्नका लागि उनले ठाडो आदेश दिए । त्यसपछि उनको ठूलो आलोचना भयो । नेकपा मन्त्रीहरूमा ‘माडे’ मानिने महासेठको यो विवाद एकातिर छ तर उनले मन्त्रालयमा मच्चाएको लुटतन्त्रको हिसाबकिताब सानो छैन ।
प्राप्त एउटा विवरणअनुसार महासेठले १० करोड भन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकका काम गर्दा कमिशनका रूपमा मात्र लिएका छन् । यी सबै प्रकरणमा जुली महतोको प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्नता भेटिएको छ । यातायातको सिन्डिकेटधारीको पक्षमा लविङ गर्दा उनको आलोचना भएको थियो । अहिले भने उनले विभिन्न पदमा गरेका नियुक्ति, ठेक्का पट्टा र टेण्डरमा थामिनसक्नु कमिशन असुलेको विवरण फेला परेको हो ।
केशवकुमार शर्मालाई सडक बिभागको महानिर्देशक बनाउँदा महासेठको खल्तीमा ३ करोड कमिशनको रकम पुगेको थियो । सडक विभाग कर्मचारीहरूमा मालदार डिभिजनका रूपमा परिचित छ । यस्तै, बलराम मिश्रलाई रेलविभागको महानिर्देशक नियुक्ति गर्दा २ करोड, दिपककुमार श्रेष्ठलाई सडक बिभाग आयोजना निर्देशनालयको प्रमूख नियुक्तीमा ५० लाख कमिशन लिएको स्रोतले जनायो ।
यता, दिपक केसी र अशोक तिवारीलारुई पदीय हैसियतभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारी दिन ५०÷५० लाख कमिशन लिएको आरोप पनि महासेठमाथि लागेको छ । ‘मन्त्रीले कुनै पनि काम कमिशन बेगर गरेका छैनन्, हरेक नियुक्तिदेखि अनेक ठाउँमा उनले रकम माग गर्छन्’, स्रोतले भन्यो,‘चुनावमा पार्टीलाई पालेको छु भन्दै उनले कसैले कारबाही गर्न नसक्ने पनि बताउन थालेका छन् ।’
यसै पनि चुनावताका पार्टीको खर्चका लागि भनेर महासेठले तीन करोड दिएको भन्ने चर्चा थियो । तर पछिल्ला दिनमा काम नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीको सूचीमा राखी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासेठलाई हटाउने तयारी गरेको चर्चा थियो । यद्यपि, झलनाथ खनालको कोटामा मन्त्री भएका कारण उनलाई नहटाउनका लागि ओलीलाई दबाब परेको बताइन्छ ।
महासेठले धरान-चतरा सडक योजनामा ठेकेदारले चाहेअनुसारको भेरिएशन स्वीकृत गर्न, आफ्ना बिश्वस्त इन्जिनिययार पठाई पत्नी जुली महतोमार्फत धरान–चतरा पूर्वको हाकिम ललिजन खनालसँग ८० लाख लिएको पनि आरोप लागेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय दांङका हाकिम हुन जुली महतोका पिए संजीत मण्डलमार्फत जितेन्द्र चौधरीले ३० लाख बुझाएको चर्चा छ । ३० लाख रुपैंया लिई पोखरा डिभिजनका प्रमूखका हरीकुमार पोखरेललाई पठाउन पनि मन्त्री महासेठकी पत्नी जुलीले रकम असुलेको बताइएको छ ।
डिविजन सडक कार्यालय चरिकोटको लागि धर्मेन्द्रकुमार झाले २५ लाख रुपैयाँ पनि जुलीकै हातमा परेको थियो । सडक तथा यातायात व्यवस्था विभागको हाकिमहरूलाई पटक-पटक बोलाइ कमिशन मागेको गुनासो आउन थालेको छ । फुल ब्राइटजस्ता बदनाम कन्सल्टिङ कम्पनीलाई काम दिनका लागि सडक, रेल विभागलाई दबाब दिई जुलीले नै त्यस्ता कम्पनीबाट मोटो रकम उठाउने गरेकी छन् ।
भदौमा कर्मचारीहरूको सरुवाको ठूलो चलखेल गर्न मन्त्रालयको सह-सचिवमा राजेश्वर ज्ञवालीलाई नियुक्त गरिएको छ । महासेठ सिँचाई मन्त्री हुँदा पिए रहेका ज्ञवालीले उनको लाइन मिलाइदिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत बाइपास गरी हालै मात्र महासेठले यातायात व्यवस्था बिभागका महानिर्देशकको सरुवा गरेका थिए । तर, त्यसमा ओलीको सिधा हस्तक्षेप हुँदा महासेठ फेल खाए ।
सडक बिभागमार्फत हुलाकी राजमार्गको ठेक्का मिलाउन आफूले चाहेअनुसारको प्याकेजिङका लागि पनि मन्त्री महासेठले दबाब दिएको स्रोतले बतायो । उल्लिखित विवरणहरूको प्रमाणसहित केही पीडितले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मन्त्री महासेठ र उनकी पत्नी जुलीविरुद्ध उजुरीको तयारी पनि गरेका छन् । स्मरणहोस् नेपाललिक्सले कालो धन थुपार्ने नेपाली मध्येका उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुली हुन् भने ज्वाँई महासेठ हुन् । जनप्रहारबाट